FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA IMO-INU - ALIKA
Alika Amerikanina Eskimo / Shiba Inu mifangaro
Shilo the Shiba Inu / Eskimo mix dog (Imo-Inu) amin'ny 3 taona - hoy ny tompony, 'Ny toetrany dia an'ny Shiba. Tena mahavita tena sy haingo izy. Raha miteny azy handry ianao dia hijoro izy raha miteny azy hipetraka ETO ianao, hipetraka eo izy raha lazainao azy ho tonga eo ambony fandriana izy dia hidina ao ambany. Tiany ny kilalao, indrindra ny baoliny vita amin'ny fingotra izay mikiakiaka, ary mamoaka ireo entana ao amin'ireo biby voatsindrona REHETRA. Malemy fanahy amin'ny sokatra fiompinay izy, ary tia milalao amin'ny zanakavavin'ilay sakaizanay rehefa avy nahazatra azy, ary ny zavatra tiany indrindra dia ny milelaka sy milelika ary milelika.
Ny Imo-Inu dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Amerikanina Eskimo ary ny Shiba Inu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity i Jack zanakay lahy, 1 taona. Mpanjakan'ny tokotaniny izy ary hihaza izay miditra rehetra, ary hiambina mandra-pialan'ny fandrahonana hitany. Raha teo am-pandresena ny valan-javaboary teo an-toerana izy dia nijanona, nijery fijoroana hazo, nijery aho ary tsy nahita na inona na inona. Roa segondra taty aoriana dia nanainga izy, nandrovitra ny fehin-tànana teny an-tanako ary nanenjika serfa rovitra fotsy 100 metatra na mahery. Tsy tratran'izy ireo izy fa nanana baolina nanenjika azy ireo. Fantatro izao ny bika aman'endriny na ny famantarana fanaony ka vonona aho amin'izany. Izy dia tànana kely ho antsika roa tamin'ny andro voalohany, saingy tamin'ny ezaka sy fiofanana sasantsasany dia lasa alika tsara izy ary tsara vintana tokoa izahay manana azy. '
Alika kely Imo-Inu — Shiba Inu ny reniny ary alika Eskimo amerikana kely ny raim-pianakaviana, sary natolotry ny D & D's Kennel
Alika kely Eskinu amin'ny 5 herinandro, sary natolotry ny D & D's Kennel
Alika kely Eskinu amin'ny 8 herinandro— 'Ity alika kely ity sy ilay etsy ambany dia samy avy amin'ny fako iray ihany. Manana toetra mahafinaritra izy ireo ary tsy tokony hitombo mihoatra ny 20 pounds rehefa olon-dehibe. Ny mpividy taloha rehetra dia efa tia azy ireo. Faran'izay tsara endrika mpamorona! ' Sary natolotry ny D & D's Kennel
Shilo the Shiba Inu / Eskimo mix (Imo-Inu) amin'ny faha-3 taonany
Stryder the Imo-Inu (American Eskimo / Shiba Inu mix) ho alika kely amin'ny 10 herinandro - Eskimo (reny) x Shiba (ray)
'Stryder amin'ny faha-2 taonany - mandehandeha manerana ny firenena amin'ny semi-kamiao isan'andro miaraka aminay izy. Izy no sakaizantsika akaiky indrindra, ary manana toe-tsaina tia filalaovana. Tiany ny mahita kilalao ao anaty kitapo miantsena isaky ny miverina avy ao amin'ilay magazay izahay. Mahatalanjona tokoa ny endriny. '
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ny Sheepdog Islandy
Lisitry ny alika amerikana eskimo mifangaro alika
orona mena pitbull shar pei mix
mampiseho ahy ny sarin 'ny manga heeler
antsasaky ny basset hound antsasaky ny voromahery
jack russell chihuahua mifangaro alika
Golden retriever sy siberian husky mix